Horyaalka Beeraleyda - Premier League, Serie A, Bundesliga Mise Ligue 1? Maxaa Loola Jeedaa Horyaalka Beeraleyda? Aflagaado Mise Amaan? - Laacib
HomeWararka Premier LeagueHoryaalka Beeraleyda – Premier League, Serie A, Bundesliga Mise Ligue 1? Maxaa Loola Jeedaa Horyaalka Beeraleyda? Aflagaado Mise Amaan?
Horyaalka Beeraleyda – Premier League, Serie A, Bundesliga Mise Ligue 1? Maxaa Loola Jeedaa Horyaalka Beeraleyda? Aflagaado Mise Amaan?
July 7, 2021 Saed Mohamed Wararka Premier League, Xulashada Laacib 0
Kubada heerka koowaad ee dalka Faransiiska waxaa si joogta ah loogu eedeyaa inay tahay tartan hal faras ah iyadoo hal koox ay xilliba iska heysato horyaalka.
Waxaa laga yaabaa inaad baraha bulshada ku aragtay iyadoo horyaalka Faransiiska lagu tilmaamayo inuu yahay horyaalka beeraleyda, gaar ahaan mudadii ay horyaalka iska heysatay kooxda Paris Saint-Germain.
Laakiin waa maxay sababta loogu yeero horyaalka beeraleyda? muxuu yahay micnaha ka danbeeya? Shabakada laacib ayaa idiin faahfaahineysa.
Kubada cagta Yurub waxaa ka jirto feker ah ‘shanta horyaal ee ugu waa weyn’ oo ka kooban Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A iyo Ligue 1. Intaas oo horyaal taageerayaasha kubada cagta waxay horyaalka beeraleyda ku tilmaamaan horyaalka Ligue 1.
Waxaa intaas sii dheer in shantaas horyaal in caadiyan horyaalka Faransiiska loo arko midka ugu liita inkastoo sannadihii ugu danbeeyay ay ka ciyaarayeen xiddigaha ugu waa weyn dunida sida Kylian Mbappe iyo Neymar.
Kalmada ‘horyaalka beeraleyda’ waa mid lagu aflagaadeeyo laguna yaso horyaalka Faransiiska iyadoo taageerayaasha horyaalada kale ay si kaftan ah u tilmaamaan in ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Faransiiska inay yihiin kuwa maalintii beero soo fasha habeenkiina kubad ciyaara. Sidaasi darteed waxay tilmaamaan in horyaalka Ligue 1 uusan aheyn horyaal laga daawan karo kubad farsamo leh ama aysan joogin xiddigo waa weyn oo u dhigma horyaalada kale.
Waxaa sidoo kale sabab u ah in horyaalka Faransiiska lagu tilmaamo horyaalka beeraleyda inay mar walba horyaalkaas iska heysato hal koox, iyadoo sannadihii ugu danbeeyay ay heysatay kooxda PSG.
80meeyadii Marseille ayaa aheyd kooxda iska heysatay horyaalka Faransiiska iyagoo ku guuleystay koobka horyaalka shan sannadood oo isku xigta, Lyon ayaa sidaas oo kale sameysay bilowgii 2000aadkii markaasoo ay todoba jeer oo isku xigta ku guuleysteen horyaalka.
Tan iyo xilli ciyaareedkii 2012-13, PSG ayaa aheyd kooxda iska heysatay horyaalka marka laga reebo labo xilli ciyaareed oo aysan qaadin, welina iyaga ayaa ah awooda muuqata ee horyaalka.
Horyaalka beeraleyda waxay sidoo kale ka tarjumeysaa in horyaalka Faransiiska uu ahaa mid quudiya horyaalada kale ee waa weyn sida Premier League. Tusaale ahaa Eden Hazard ayaa ka tagay Lille sannadkii 2012 una saxiixay Chelsea, Riyad Mahrez iyo N’Golo Kante waxay ku biireen Leicester City, Anthony Martial wuxuu ka tagay Monaco 2015kii isagoo u wareegay Manchester United halka Alexandre Lacazette uu ka tagay Lyon sannadkii 2017 una wareegay Arsenal.
Laakiin waqtiyadii dhawaa, maalgashiga PSG iyo Monaco ayaa keentay inay soo jiitaan xiddigo waa weyn halka kooxaha Faransiiska ay soo saarayaan ciyaartoy fiican oo tayo leh taasoo sarre u qaaday maqaamkii horyaalka.
Si kastaba, waxaa weli horyaalka xujo ku ah in kaliya ay weli hal koox u madax weyn tahay. Bundesliga ayaa iyagana la mid ah oo Bayern Munich ay ka talisaa halka Serie A ay Juventus iska heysatay sannadihii u danbeeyay ka hor inta aysan Inter sannadkan kala wareegin laakiin Serie A wuxuu labada horyaal kale kaga roonaa in koobabka kale ee maxaliga ay qeybsan jireen kooxo kale halka PSG iyo Bayern ay ku guuleysanayeen koob walba oo maxali ah.